अस्पतालले लिनै छाडे बिरामी – Pradesh Network
विराटनगर, १७ चैत । विश्व व्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण त्राससँगै प्रदेश १ का अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले अन्य समस्या भएका बिरामीलाई पनि उपचारका लागि लिन छाडेका छन् ।
जसका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या भएका बिरामीलाई उपचार पाउन असहज हुन थालेको छ । बिरामी उपचारविहीन बन्न थालेका छन् । ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु पनि सुनसान छन् ।
बिरामीले पूरै भरिने अस्पतालका बेड अहिले प्राय खाली छन् । दैनिक ४० जनासम्म हुने विराटनगरको कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा अहिले तीन जना बिरामी मात्रै छन् । कोरोना त्रासले अन्य समस्या भएका बिरामी नलिने र उपचार ठीक नभइकन डिस्चार्ज दिने प्रचलन स्वास्थ्य संस्थामा बढेको छ ।
नागरिक अगुवा रामबाबु दाहालले कोरोना त्रासका कारण अन्य बिरामीले पनि उपचार पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनु भयो । सरकारले ‘लकडाउन’ गरेका कारण घरबाटै बाहिर निस्कन नपाउने अवस्थामा बल्लबल्ल अस्पताल पुगेका बिरामीले उपचार पाउनै गाह्रो भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको गैरजिम्मेवारीपन र लापरबाही भएका कारण सर्वसाधारण नागरिकको उपचारमा राज्यले उचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने दाहालले बताउनु भयो । पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामी उपचारका लागि पुग्दा अस्पतालले नलिने गरेको बताउनु भयो ।
ढुंगेलले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा तत्काल चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्न सरकारले आग्रह गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यो नदेखिएको उल्लेख गर्नु भयो । कोशी अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. रोशन खड्का कोरोना त्रासका कारण चिकित्कनै असुरक्षित बनिरहेको बताउनु हुन्छ ।
‘महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले विश्वलाई आतंकित पारेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘बाहिरबाट आउने बिरामी यदि कोरोना संक्रमित भएको खण्डमा सिधा सम्पर्क हुँदा सर्ने भएकाले उपचारमा चिकित्सक डराउन थालेका हुन सक्छन् ।’ डा. खड्काले बिरामीका माध्यमबाट कोरोना संक्रमण भएमा आफ्नै ज्यान जाने त्रासका कारण चिकित्सक हच्किएको उल्लेख गर्नु भयो । बिरामीबाट चिकित्सकलाई सर्ने र चिकित्सकका मार्फत अरु बिरामीलाई पनि सर्ने सम्भावना धेरै रहने उहाँको भनाइ छ ।
कोशी अस्पतालकी निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले अस्पतालमा सबै खाले बिरामीले सहज उपचार पाइरहेको दाबी गर्नु भयो । ‘हामीले आकस्मिक र बहिरंग सेवा खुल्ला नै राखेका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘आपतकालिन अवस्थामा पनि जस्तो सुकै उपचार गराउन पछि परेका छैनौं ।’
तर उपचारका लागि कस्ता खालका बिरामीलाई लिने या नलिने भन्ने कुराको निर्धारण अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने भएकाले उपचार गराउन आवश्यक नपर्नेलाई भने नलिएको हुन सक्ने डा. मिश्राको दाबी छ ।
विराटनगर, २ वैशाख । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले आजदेखि कोरोना भाइरसको परिक्षण गर्न थालेको छ । द्रुत निर्धारण परीक्षण आरडीटीद्धारा रोगको पहिचान गरीने र परीक्षण रिपोर्ट १५ मिनेटमा नै आउने नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका सन्तोष विश्वकर्माले बताउनुभयो । परीक्षणकालागि चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्रीहरु ल्याइसकेकाले परीक्षण सुरुगरिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सुवेदीका अनुसार […]